Inona ny tontolo IT tsara indrindra ho an'ny orinasako? | Martech Zone
Inona ny tontolo IT tsara indrindra ho an'ny orinasako?
Alarobia 7, 2013 Alarobia 7, 2013 Jenn Lisak Golding
Iray amin'ireo lafiny tena lehibe miaro ny orinasantsika amin'ny vanim-potoana niomerika ny fananana vahaolana IT efa voalamina sy voafehy. Saingy, inona no safidy tsara indrindra amin'ny orinasao? Raha ny marina dia miankina amin'ny haben'ny orinasanao izany, raha te-handray ekipa IT anatiny ianao, ary hatraiza ny fanaraha-maso tadiavinao amin'ny angon-drakitrao. Ho an'ny orinasa marobe, fanontaniana sarotra valiana ireo.
ny ambongadiny mpanjifa colocation, Lifeline Data Centres, dia niresaka momba ny tombony azo amin'ny vahaolana IT samihafa, izay nanampy anay hivadika infographic. Mikaroka momba ny inona, ny toerana, ny iza, ary ny habetsaky ny vahaolana IT isan-karazany, ao anatin'izany ny: computing cloud, vahaolana mitantana, colocation ary foibe angon-drakitra anatiny.
Na inona na inona vahaolana fidinao, ireto misy fomba fitadidy lehibe tsy tokony hadino:
Avelao hitarika anao ny rindran-tsikera ataonao.
Ny faharetan'ny fotoana ambony sy ny fahamendrehana dia sarotra tanterahina ao amin'ny efitrano aoriana.
IT staffing versus outsourcing dia olana iray hafainganana, vola ary kalitao.
Ataovy foana ny matematika. Ny vola tsotra dia mitaky vola ary miakatra ny sarany isam-bolana.
Ahoana ny fomba iarovan'ny orinasanao ny data-nao amin'izao fotoana izao?
Dingana 10 mankany amin'ny serivisy ho an'ny mpanjifa ara-tsosialy mamiratra
Ny mpanome tolotra mailaka SaaS Pricing penalty